Ziziphi iindlela zokufumana i-backlink ngonyaka ozayo?
Wonke umntu osebenza kwimakethi yedijithali uyazi ukuba ukwakha ikhonkco kubaluleke kakhulu kwimpumelelo xa kuziwa ekuphakanyeni igunya lewebhu kunye nokufumana isikhundla esiphezulu kwi-SERP. Ukuba ungathanda isigaba esiphakeme kwi-SERP, udinga i-backlink ngaphezulu. Umgangatho wakho kunye nomxholo oqulunqwe kakuhle awuyi kubonwa ngabafundi bakho abanakho ukuba ngaba akukho ikhonkco. Ngoko, i-backlinks esemgangathweni yenye yezona zinto zibalulekileyo kwi-injini yokucwangcisa injini namhlanje. Zonke iinqununu eziphezulu kunye nezikhundla zineetoni eziqhagamshelana nezinye izinto ezisemgangathweni ezibonisa kubo. Izixhumanisi zisebenza njengevoti zamaphepha afunyanwa yiGoogle. I-Google ibheka iphepha kunye namawaka ezinxibelelwano ezininzi ngaphezu kwekhasi ezine-backlinks ezilishumi. Nangona kunjalo, ukuba ezi ngqungquthela zivela kwimithombo ye-intanethi eyaziwayo, iyakudla amawaka angamazinga angaphandle aphezulu.
Siphila kwihlabathi apho zonke iinkampani zifuna i-backlinks. Abathengi bawafuna imihla ngemihla, kwaye kuba nzima ukuba uhlale phezulu kule mdlalo. Abathengisi abaninzi bayeke ukukhankanya iikhankaso zokwakha izixhumanisi njengoko beyifumana into ecasulayo, ingenanto kwaye ingabi nantlonelo. Nangona kunjalo, akuyona indlela yokuphuma. Ukwandisa i-traffic organic, kufuneka udale iphrofayili ye-backlink esemgangathweni. Ngoko, ukufumana i-backlinks ngo-2017, 2018 kunye nayo yonke iminyaka ezayo iya kuba yinto ephambili. Kukho iindlela ezingatshintshi ongazisebenzisayo kwikhankaso yokwakha ikhonkco ukufumana umphumo obonakalayo. Kule nqaku, siza kujonga ngokucokisekileyo ngala manzi kunye neengcebiso zengqamaniso zokwakha iinjongo ezisasebenza ngo-2018.
Indlela yokufumana i-backlink ngo-2018?
Ukubhengezwa kwindwendwe yithuba elihle kakhulu lokuqhuba isithuthi esitsha nejoliswe kwiwebhusayithi yakho. Yindlela ekhethekileyo kunye ne-niche ekhethekileyo yokudala ijusi yelinki yekhwalithi. Ukongezelela, kukunika ithuba lokuzithengisa ngokwakho njengengcali yoshishini kwaye ubonise abasebenzisi igunya lakho.
Indlela efanelekileyo yokuseka i-backlink yangaphakathi kukudala iblogi yesayithi lakho. Nangona kunjalo, ukuthumela kwiisayithi ezivakalisi ezisegunya eliphezulu kunye nolwazi oluhle phakathi kwabasebenzisi abasebenzisa izithuthi ngaphandle koko bekwazi ukufikelela. Kwi ngasinye post guest, kufuneka usebenzise umgca wombhali womgca odibanisa kwisiza sakho. Kuya kukusebenzela njengophuhliso lokukhulula kunye nokuphucula igunya lakho. Ubhala isihloko esikhulu esisekelwe kuphando kunye nokutshintshiselwa komsebenzi wakho ofumana i-backlink eyigugu. Yonke into ibonakala ilungile, akunjalo? Ngoko, injongo ephambili apha kukuphela kwesithuba seendwendwe kwiindawo eziphakamileyo eziphezulu. Ndiyacebisa ukuba ungenzi ukuchitha ukudala amanqaku kwiiwebhsayithi eziphambili ze-spammy.
Bhekisela kubathonya kwizithuba zakho
Ndingaphezulu koko abantu abanegunya kunye nabachaphazeli bakho. Bathetha kwaye benze abasebenzisi baqhawule kubo. Amanqaku anjalo azuza ngokugqithiseleyo ngexesha elifutshane njengoko bebambe kwaye baqulethe ulwazi oluthe lusekelwe kuphando. Abo bapapasha amanqaku anjalo benza njalo ngenxa yezizathu ezithile. Bafuna ukufumana i-backlinks emgangathweni ephezulu ngokusebenzisa la manqaku. Ngoko, xa uthetha abantu abadumiweyo kumacandelo akho, uya kufumana amanqaku athile ajoliswe kuwo. Enye enye kunye nayo kukuba impembelelo yengqondo okhankanywe nayo ingabelana ngala manqaku kunye nabalandeli babo abaninzi Source .